Inkonzo yasemkhosini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Inkonzo yezempi
inqaku 18 "b" kwikhadi lomkhosi
inqaku le-18 "b" kuhlobo lwe-ID lomkhosi. Yilahle ngaphandle okanye ungayibonisi nakubani na udidi "B", ngexesha loxolo abayi kubizwa. Inqaku 18. Ukuphazamiseka kubuntu: Inqaku libonelela ngezinto ezithile (psychopathies, transient ...
yintoni umgama ukusuka kumgca wecala lomthwalo kwi-lychki umphathi wesigqeba
yintoni umgama ukusuka emaphethelweni egxeni lomtya ukuya kumgcana wejenja encinci? 3! Ngokuhambelana noMyalelo woMphathiswa Wezokhuseleko we-Russian Federation ye-03.09.2011 N 1500 "Kwimithetho yokunxiba iyunifomu yasemkhosini kunye neempawu ...
Banike i-questionnaire kwiVoikenkomat kubazali ukuba bazalise ngemibuzo: idatha malunga nezihlobo kunye nobukhulu bomvuzo, ukubonelelwa kwezindlu
Banike iphepha lemibuzo ekubhaliseni emkhosini nasekubhaliseni iofisi yabazali ukuba bayigcwalise ngemibuzo: idatha kwizalamane kunye nobungakanani bomvuzo, ukubonelelwa ngezindlu Kulungile, kunjalo, kusemthethweni. Awucelwa ukuba uveze ulwazi oluyimfihlo. ukuba kunjalo, ke ...
Isigaba sokuphela kweB4 ukuthini oku kuthetha ntoni?
Kukuthini ukuba kwinqanaba le-B4? ayilungelanga, i-B-3 ayikakulungeli oko. Kwimikhosi, elula. Apho kungekho kakhulu ...
Ungangena njani kwinqanawa emkhombeni?
Ungena njani kumkhosi wamanzi emkhombeni? Ngokwesiqendu se-14 seMimiselo yokunyanzelwa kwabemi baseRussian Federation, isigqibo malunga nokuqeshwa komkhosi, isebe lomkhosi oxhobileyo weRussia, abanye ...
Yintoni umkhosi. iofisi yomlawuli kwaye wenza ntoni?
Yintoni indoda yasemkhosini. i-ofisi ye-commandant kwaye yenza ntoni? Oku kubizwa ngokuba ngamapolisa omkhosi. Igama liyazithetha. 93.2. Eyona misebenzi iphambili yenkonzo ye-commandant yile: ukuphuculwa kwamanyathelo kunye nombutho wolawulo ngaphezulu ...
Ngaba kunzima ukungena esikolweni sabasemkhosini kunye nento efunekayo yokwamkelwa ???
Ngaba kunzima ukungena kwisikolo somkhosi kwaye ufuna ntoni ukuze wamkelwe ??? kunokuba kunjalo. udinga ubumi beRussian Federation, nangona isihogo siyayazi Akunzima kangako kunakwiyunivesithi yesiqhelo. ...
Ngakanani ixesha oyifunayo kwi-private to colonel? Umyinge wexesha ukusuka kwinqanaba ukuya kwizinga! Ngubani owaziyo?
Kuthatha ixesha elingakanani ukusuka ngasese ukuya kwi-colonel? Ixesha eliqhelekileyo ukusuka kwinqanaba ukuya kwinqanaba! Ngubani owaziyo? Esi sisicatshulwa esivela kwiMigaqo yenkqubo yokupasa inkonzo yasemkhosini:
Umbuzo wokuchaswa kumkhosi
Umcimbi wokumiswa emkhosini Ukuba unyana wakho ekholejini unexesha lokusebenzisa ngokusemthethweni ilungelo lakhe lokurhoxiswa, ngokuqinisekileyo ngekhe anikwe elinye ityala. Ndigxininisa - NGOKUSESIKWENI, t ...
Demob othandekayo, okanye ukhanyiswe: yintoni intloko kunye neqhekeza emkhosini? Ingaba ikrele lingakhonza unyaka? Ndiyabulela kwangaphambili !!!
Mademobel amathandekayo, okanye abakhanyiselweyo: yintoni ukhakhayi kunye neqhekeza emkhosini? Ngaba ukakayi lunokuhlala unyaka? Ndiyabulela kwangoko!!! ukakayi, inkqayi, umoya, njl njl.
Uthini umahluko phakathi kweyigaba yokuqala, yesibini neyesithathu yabemi kwindawo yokugcina? Ndingayifumana njani indlela yam?
Nguwuphi umahluko phakathi kodidi lokuqala, lwesibini nolwesithathu lwabemi abakwindawo yogcino? Ndazi njani ukuba leliphi ibanga endikulo? Ubudala kumahlelo kunyaka ophelileyo andisiwe ngamagosa ngeminyaka emi-5. ...
Amandla omhlaba ... zithini .. zibandakanya ntoni ..?
Amandla omhlaba ... zithini .. zibandakanya ntoni ..? Imikhosi Yomhlaba (yezeMikhosi yoMhlaba) zezona zininzi kwaye zahlukahlukene ngokwezixhobo kunye neendlela zokulwa zomkhosi oxhobileyo weRussian Federation (iFF Armed Forces), eyilelwe ...
Ungasula phantsi umkhosi? Ukususela kwinkonzo yenkontileka
Ungawushiya njani umkhosi? Ukusuka kwinkonzo ngesivumelwano Funda isivumelwano sakho, onke amatyala okugxothwa kwinkonzo apelwe phaya. Kuya kufuneka ubhale ingxelo yokugxothwa ngenxa yokungathobeli imigaqo yesivumelwano c) ngokunxulumene ...
Isamani ifikile, andiyityikityanga ... kufuneka ndiye kubhaliso lomkhosi nakwiofisi yokubhaliswa?
Ndifumene isamani, andiyityikityanga ... ndinyanzelekile ukuba ndiye kubhaliso lomkhosi nakwiofisi yobhaliso? Iminyaka yobhaliso, inyanzelekile ukuba ivele kwi-ofisi yobhaliso lomkhosi, kwaye le yindlela yokubaleka kwinkonzo yasemkhosini, hayi ulwazi lomthetho, ...
Sawubona, ndabelwa kwinkonzo yokukhawuleza kwinqanaba le-Semenov, i-security brigade, ngaba ndiyazisola ukuya apho?
Molo, ndanikwa inkonzo yasemkhosini kumkhosi weSemyonovsky, iqela lezokhuseleko, ngaba ndiya kuzisola ngokufika apho? Apho iofisi yokuqesha ikumisele, yonke le yinkunkuma, uyayiqonda imikhosi yakho kuphela ...
Uthini umahluko phakathi kwegosa lomhlalaphantsi kunye negosa eligcinwe kuyo?
Nguwuphi umahluko phakathi kwegosa elidla umhlala-phantsi kunye negosa eligcinayo? Impendulo yokuqala yeyona ichanekileyo. Bayagxothwa kwinkonzo yasemkhosini nokuba bathathe umhlala-phantsi okanye babekelelwe. Umahluko phakathi kwabo ukwinqanaba ...
ngubani nabasebenzi becandelo likarhulumente?
ngoobani abasebenzi becandelo likarhulumente? Abasebenzi beqela elihlahlo-lwabiwo mali babandakanya abasebenzi abasebenza kwimibutho, kumaziko, kumashishini, njl. IZIQULATHO ZIQINISEKISWE kuhlahlo-lwabiwo mali (lomdibaniso, lwasekhaya okanye uhlahlo-lwabiwo mali lwesifundo ...
Iyintoni isicwangciso "seqonga"? Iyintoni isicwangciso "seqonga"? Ndingafumana phi ulwazi malunga nezinye izicwangciso ezikhoyo?
Yintoni i-Fort Fortress? Yintoni i-Fort Fortress? Ndingalufumana phi ulwazi ngezinye izicwangciso ezikhoyo? Sukuyigcwalisa intloko yakho ngolwazi olungayifuniyo. Ufuna ukwazi yonke into malunga nezicwangciso ...
Ingakanani ithikithi lempi kunye nendawo yokuyithenga
Ixabisa malini i-ID yasemkhosini kwaye uyithenga phi i-70 lamawaka kwindawo yokuthengisa esemthethweni yaseSt.
Ukufunda ngamalungelo okubhalisa emkhosini kunye nokubhalisa iofisi, uqeqesho lohlobo lweB luhlala ixesha elingakanani?
Ukufundela ilayisensi kubhaliso lomkhosi kunye nokubhaliswa kweofisi, kuthatha ixesha elingakanani uqeqesho kudidi B? Ngokwesicelo sobhaliso, ubhaliso lomkhosi kunye neofisi yokubhalisa inokumthumela kuqeqesho kwisikolo esiqhelekileyo sokuqhuba phantsi kwenkqubo "yoqeqesho lwabaqhubi beklasi C". ...
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,902.